कलियुग,अचम्म को घटना,युवति बसिन युवकको घर बाहिरै धर्ना ! भन्छिन बिहे नगर्दासम्म धर्ना जारी गर्छु « गोर्खाली खबर डटकम
कलियुग,अचम्म को घटना,युवति बसिन युवकको घर बाहिरै धर्ना ! भन्छिन बिहे नगर्दासम्म धर्ना जारी गर्छु
भारत : एक प्रेमिका आफ्नो प्रेमिको घरबाहिर धर्नामा बसेकी छन्। प्रेमिले आफुसँग बिहे गर्नुपर्ने माग गर्दै भारतको जालन्धरको बस्तीमा रहेको डेनिसमन्डाको रसिला नगरमा उनी धर्नामा बसेकी हुन। आफुसँग बिहे नगरेसम्म धर्ना जारी राख्ने उनले बताएकी छन्। तर युवकका परिवारले त्यसबारे जानकारी नभएको बताएको उनले बताइन।
विगत ५ वर्षदेखि आफुहरुको प्रेम स’म्बन्ध रहेको बताउने ती युवतीले केटाको परिवारले आफुहरुको प्रेमलाई स्विकार नगरेको बताइन। आफुले बिहेको बारेमा कुरा गर्न खोज्दा बिहे गर्न नमान्ने गरेकाले प्रहरीमा समेत उजुरी दिएको ती युवतीले बताइन।
तर प्रहरीले समेत कुनै छा’नविन नथालेकाले बा’ध्य भएर केटाको घरबाहिर धर्नामा बसेको उनले बताइन । आफु यसअघि समेत प्रेमिको घरमा आएको र त्यतिबेला युवकको परिवारले आफुलाई कु’टपि’ट गरेको ती युवतीले बताएकी छन्।
के तपाईलाई रातीमा धेरै पसिना आउँछ ? जानी राखौँ तपाईको स्वास्थ्यको लागि यो धेरै ख तरनाक सा वित हुनसक्छ !
लोग्नेलाई खाना पकाएर नखुवाउने र सँगै सुत्न नदिने श्रीमतीलाई ६ वर्ष जेल